ကိုဗစ် ရောဂါ ပျောက်ကင်း လို့ ဒီကနေ့ အိမ်ပြန်ခွင့် ရပြီ ဖြစ် တဲ့ ဦးကျော်သူ နဲ့ ထွန်းကိုကို – Shwe Ba
ကိုဗစ် ရောဂါ ပျောက်ကင်း လို့ ဒီကနေ့ အိမ်ပြန်ခွင့် ရပြီ ဖြစ် တဲ့ ဦးကျော်သူ နဲ့ ထွန်းကိုကို
Fighting အ သင့် ! အသင့် ! Fighting.အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျော်နဲ့ထွန်း အိမ်ပြန်ခွင့် ရပါပြီခင်ဗျား။ ကိုဗစ် ကူးဆက်မှုကြောင့် ရက်ပေါင်း (၁၈)ရက်တိတိ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံ ခဲ့ရပါသည်။ ကုသပေးခဲ့ကြသော ဆရာဝန်၊ဆရာဝန်မများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဝေဘာဂီဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့်တကွ ပြင်ပမှကျွန်တော်တို့ အတွက် အဟာရဒါနပြုကြသော အလှူရှင် အပေါင်း တို့နှင့် အားပေးနှစ်သိမ့် မေတ္တာပို့ကြသော ညီ/ညီမငယ် အနုပညာရှင် များ၊ ပရဟိတသမားများ ၊မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ များ၊ပြည်သူလူထု အပေါင်းအပြင်
နေ့စဉ် ယ နေ့တိုင် ဆေးရုံတက်သည်မှ အစပြု၍ မေတ္တာဓါတ် ပို့လွှတ်ပေးနေကြသော ကျေးဇူးရှင် ဆရာတော်ဘုရားအပေါင်း တို့အား ရင်ထဲ နှလုံးသား ထဲ မှ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ အထူးကျေးဇူးတင် ရှိကာ သာဓု သာဓု သာဓုဟုခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် ကျွန်တော့်အား သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းလိုက်သော မမြင် လိုက် ရ သည့် အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်ပဋ္ဋာန်းဆက် (နှစ်ဦး) အားလည်း အထူး သာဓု သာဓု သာဓုဟု ခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော့် မွေးနေ့ အတွက် ဆေးရုံသို့ ပို့ပေးကြသောအမှတ်တရ မွေးနေ့ကိတ် များ၊ ပန်းစည်းများ၊ မွေးနေ့ မေတ္တာ စကားများ၊Fighting Group များအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ နေအိမ်အသီးသီးတွင်တစ်ပါတ်နား၍ဆေးရုံ၌ ပြန်လည်ဆေးစစ်ချက်ယူပြီးချိန် တစ်လခန့်အကြာတွင် ပရဟိတ စိတ်ဓါတ်သစ်၊ အားမာန်သစ် တို့ဖြင့် ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် (ကျော် + ထွန်း)တို့သည် လောကကြီးအတွက် အသင့် “FIGHTING ” ပါဟု။ ယနေ့ စနေနေ့(၇-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဝေဘာဂီ ဆေးရုံမှ နေအိမ် သို့ စတင်ရွေ့ ပါတော့ မည် ။
Fighting အ သငျ့ ! အသငျ့ ! Fighting.အားလုံး မင်ျဂလာပါ ခငျဗြာ။ ကြျောနဲ့ထှနျး အိမျပွနျခှငျ့ ရပါပွီခငျဗြား။ ကိုဗဈ ကူးဆကျမှုကွောငျ့ ရကျပေါငျး (၁၈)ရကျတိတိ ဝဘောဂီ ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံ ခဲ့ရပါသညျ။ ကုသပေးခဲ့ကွသော ဆရာဝနျ၊ဆရာဝနျမမြား၊ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား၊ ဝဘောဂီဆေးရုံအုပျကွီးနှငျ့တကှ ပွငျပမှကြှနျတျောတို့ အတှကျ အဟာရဒါနပွုကွသော အလှူရှငျ အပေါငျး တို့နှငျ့ အားပေးနှဈသိမျ့ မတ်ေတာပို့ကွသော ညီ/ညီမငယျ အနုပညာရှငျ မြား၊ ပရဟိတသမားမြား ၊မိတျဆှသေင်ျဂဟ မြား၊ပွညျသူလူထု အပေါငျးအပွငျ
နစေ့ဉျ ယ နတေို့ငျ ဆေးရုံတကျသညျမှ အစပွု၍ မတ်ေတာဓါတျ ပို့လှတျပေးနကွေသော ကြေးဇူးရှငျ ဆရာတျောဘုရားအပေါငျး တို့အား ရငျထဲ နှလုံးသား ထဲ မှ လှိုကျလှိုကျ လှဲလှဲ အထူးကြေးဇူးတငျ ရှိကာ သာဓု သာဓု သာဓုဟုချေါဆိုလိုကျပါသညျ။ အထူးအားဖွငျ့ ကြှနျတေျာ့အား သှေးရညျကွညျလှူဒါနျးလိုကျသော မမွငျ လိုကျ ရ သညျ့ အသကျသခငျ ကြေးဇူးရှငျပဋ်ဋာနျးဆကျ (နှဈဦး) အားလညျး အထူး သာဓု သာဓု သာဓုဟု ချေါဆိုလိုကျပါသညျ။
ကြှနျတေျာ့ မှေးနေ့ အတှကျ ဆေးရုံသို့ ပို့ပေးကွသောအမှတျတရ မှေးနကေိ့တျ မြား၊ ပနျးစညျးမြား၊ မှေးနေ့ မတ်ေတာ စကားမြား၊Fighting Group မြားအားလုံးကို ကြှနျတျောတို့ နအေိမျအသီးသီးတှငျတဈပါတျနား၍ဆေးရုံ၌ ပွနျလညျဆေးစဈခကျြယူပွီးခြိနျ တဈလခနျ့အကွာတှငျ ပရဟိတ စိတျဓါတျသဈ၊ အားမာနျသဈ တို့ဖွငျ့ ကြှနျတျော တို့ နှဈယောကျ (ကြျော + ထှနျး)တို့သညျ လောကကွီးအတှကျ အသငျ့ “FIGHTING ” ပါဟု။ ယနေ့ စနနေေ့(၇-၁၁-၂၀၂၀)ရကျနေ့ ၊ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ ဝဘောဂီ ဆေးရုံမှ နအေိမျ သို့ စတငျရှေ့ ပါတော့ မညျ ။
Previous post အသည်း ယား စရာ ကောင်းအောင် ဆော့ ကစားထား တဲ့ ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်
Next post သူ့ရဲ့ OFFICAL ချပြ လိုက်ပြီ ဆိုကာ မမဆောင်း ကို မထိဖို့ ပြောလိုက် တဲ့ ယုန်လေး